N N – Shwe Naung
မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် L လစ်ရှားကို သိကြမယ် ထင် ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြား ရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေး
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှု ရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social
ညို့အားပြင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………….
N N | May 20, 2022
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော် ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ် နော်။ မော်ဒယ်လ် လောက ကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေး ပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြား ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံ မှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ
သွယ်လျပြေပြစ်တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် စုမြတ်ဖူးရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……….
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ 1 st Runner Miss Universe Myanmar 2018 ရရှိ ထားတဲ့ တက်သစ် မော်ဒယ် စုမြတ်ဖူး ကိုသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသ
အချိုးအစား ပြေပြစ်တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အလှ ဗီဒီယိုလေး………
အချိုးအစားပြေပြစ်ပြီး သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီမော်ဒယ်လ် သဇင်ဦး ကို ပရိတ်သတ်ကြီး သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ရင်သပ်ရှူမောစရာ ကောင်းလောက်အောင် စွဲမက်ဖွယ် အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်းဝါစိုပြေတဲ့ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ အမြဲလိုလို
ကမ်းခြေမှာ အထာကျကျ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးများကို ပရိသတ်တွေဆီ ဝေမျှလာတဲ့ မေမြင့်မိုရ်………..
ပရိသတ် အချစ်တော် မေမြင့်မိုရ် က တော့ MRTV -4 ဇာတ်လမ်း တွဲ များစွာ ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ ပြီး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ရင်ထဲ ကို ရောက်ရှိ ခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျရာ ဇာတ် ရုပ် ကို